Fihaonan’ny CFM sy ny Mesupres
Namaly ny fanasan’ny Vaomieran’ny fampihavanana malagasy (CFM) ny Ministeran’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa, ary tonga nanatrika ny fihaonana ny Minisitra, Pr. Elia Béatrice ASSOUMACOU.
Araka izany, mba hisian’ny filaminana eto amin’ny tany sy ny firenena dia niroso tamin’ny fifampidinihana ikarohana vahaolana maharitra manoloana ny korontana misy eny amin’ny anjerimanontolo eto Madagasikara ny Ministera mpiahy sy ny CFM androany 11 Martsa 2021 teto Antananarivo.
Miroso amin’ny fifanakalozana hatrany ny Ministera manoloana ireo olana maro samihafa ary tsy mitsahatra ny mitady vahaolana ara-teknika, ara-politika ary ara-tsosialy mba hitsinjovana hatrany ny filaminana, sy hanajana ny fihavanana eo anivon’ny oniversite sy ny eto amin’ny firenena. Izany dia mba ahafahana miroso amin’ny fampianarana satria tsara marihina fa fohy ny taom-pianarana nohon’ny valan’aretina Covid 19.
Manao ny ainy tsy ho zavatra amin’ny famitana ny tetik’asa fanatobiana nomerika na « digitalisation » ihany koa ireo tompon’andraikitra eto anivon’ny Ministera miaraka amin’ireo avy amin’io tetik’asa io.
Tao anatin’ny herinandro mahery teo dia nisy ny fitetezana ireo oniversite manerana an’i Madagasikara izay mbola mitohy hatramin’izao ho fanamarinana sy fanaraha-maso ny lisitr’ireo mpianatra ahafahana mandoa ny vatsim-pianaran’izy ireo. Anisan’ny hanamora ny fandoavana ny vatsim-pianarana ity « digitalisation » ity.
Tsy misy oniversite atao zanak’ikalahafa fa mitovy avokoa ny fomba fanatanterahana ny tetik’asa ka rehefa vita ny « digitalisation » sy ny fanamarinana dia miroso avy hatrany amin’ny fandoavana ny vatsim-pianarana.
Ho an’ny sekoly ambony pôliteknika eny Vontovorona manokana dia mbola misy lisitra fanampiny nohon’ny fandaminana anaty teo anivon’ny sekoly. Manafaingana ny fikirakirana an’izany ny teknisiana sy ireo tompon’andraikitra amin’ilay tetik’asa mba ahafahana miroso haingana ny fandoavana ny vatsim-pianarana.